Inkqubo yoNcedo lwexeshana kwiNkqubo yeMindeni ehluphekileyo
Ukunceda intsapho ihambe ukusuka kwiNtlalontle ukuya emsebenzini
Inkxaso Yesikhashana yeeNtlupheko eziThathaka (i-TANF) ixhaswa ngemali-i-state elawulwayo-inkxaso yenkxaso-mali yemindeni ephantsi engenayo kunye nabantwana abaxhomekeke kuyo kunye noxanduva lwezemali kubafazi abakhulelweyo kwiinyanga ezintathu zokugqibela zokukhulelwa. I-TANF inikeza uncedo lwezexeshana lwezezimali ngelixa ikwabanceda nabamkeli ukuba bafumane imisebenzi eya kubavumela ukuba bazixhase ngokwabo.
Ngowe-1996, i-TANF ithathe indawo yenkqubo yezenhlalakahle endala, kuquka neNcedo kwiiNtsapho kunye neNkqubo yabantwana abaxhomekeke kwi-AFDC.
Namhlanje, i-TANF inikeza igranti zonyaka kuwo onke amazwe ase-US, iindawo kunye noorhulumente bezizwe. Iimali zisetyenziselwa ukuhlawula izibonelelo kunye neenkonzo ezihanjiswa lizwe ukunceda iintsapho ezihlwempu.
Ukuze bafumane izibonelelo zabo ze-TANF zonyaka, amazwe kufuneka abonise ukuba asebenza ngeenkqubo zazo zeTANF ngendlela efezekisa ezi njongo:
ukuncedisa iintsapho ezihlwempu ukwenzela ukuba abantwana banokunyamekela emakhaya abo
ukunciphisa ukuxhomekeka kwabazali abahluphekayo ngokukhuthaza ukulungiswa komsebenzi, umsebenzi kunye nomtshato
ukukhusela ukukhulelwa kwangaphandle komtshato
khuthaza ukwakhiwa nokugcinwa kweentsapho zabazali ababini.
Ukufaka isicelo kwiTANF
Nangona iprogram ye-TANF epheleleyo ilawulwa yi-Administration Administration for Children and Families, ngalinye likarhulumente linoxanduva lokubeka iimfuno zalo zokufaneleka zemali, nokwamkela nokuqwalasela izicelo zoncedo.
I-TANF yinkqubo yokuncedisa imali ngemindeni enezingane ezithembekileyo kunye nabafazi abakhulelweyo kwiinyanga ezintathu zokugqibela zokukhulelwa.
Ukuze ufaneleke, kufuneka ube ngummi wase-US okanye umntu ongenamkelekanga kwaye ungumhlali waseburhulumenteni ocela uncedo. Ukufaneleka kweTANF kuxhomekeke kwingeniso yomfaki-sicelo, izibonelelo kunye nokuba khona komntwana oxhomekeke kuneminyaka engama-18, okanye ngaphantsi kweminyaka engama-20 ukuba umntwana ungumfundi opheleleyo kwixesha eliphakamileyo okanye kwisikolo esiphathelene nesikolo esiphakamileyo.
Izidingo ezifanelekileyo zokufaneleka zihluka ukusuka kwilizwe ukuya kwilizwe.
I-TANF yenzelwe intsapho imali engenayo kunye nezibonelelo ezinganeleyo ukuhlangabezana neemfuno ezingundoqo zabantwana babo. Urhulumente ngamnye ubeka umvuzo omkhulu kunye nemithombo (ukheshi, i-akhawunti yebhanki, njl.) Kwimimandla ephezulu apho iintsapho aziyi kufaneleka kwi-TANF.
Umsebenzi kunye neZikolo eziyimfuneko
Ngaphandle kwemibalwa embalwa, abamkeli be-TANF kufuneka basebenze ngokukhawuleza xa bekulungele umsebenzi okanye kungekudala emva kweminyaka emibili emva kokuqala ukufumana uncedo lweTANF. Abanye abantu, njengabantu abakhubazekileyo kunye nabadala, banikezwa inxaxheba kwaye bayeke ukusebenzela ukufaneleka. Abantwana kunye nabazali abatsha abangatshatanga abantwana kufuneka bafeze iimfuno zokuya esikolweni ezisungulwe kwinkqubo ye-TANF.
Ukubala ngokubhekiselele kumyinge wokuthatha inxaxheba komsebenzi, abazali abangabodwa bamele bathathe inxaxheba kwimisebenzi yomsebenzi ngokulinganisa iiyure ezingama-30 ngeveki, okanye umyinge weeyure ezingama-20 ngeveki ukuba uneminyaka engaphantsi kweminyaka emithandathu. Iintsapho zabazali ababini kufuneka bathathe inxaxheba kwimisebenzi yomsebenzi ngokulinganisa iiyure ezingama-35 ngeveki okanye, ukuba bafumana uncedo lokuncedisa abantwana kwi-Federal, iiyure ezingama-55 ngeveki.
Ukungaphumeleli ukuthatha inxaxheba kwimfuno yomsebenzi kunokubangela ukunciphisa okanye ukunciphisa inzuzo yeentsapho.
Amazwe akakwazi ukuhlawulisa abazali abangabodwa abangabantwana abangaphantsi kweesithandathu ngenxa yokungakwazi ukuhlangabezana neemfuno zomsebenzi ukuba abanako ukufumana ukunakekelwa kwabantwana okwaneleyo.
Imisebenzi enokubaluleka kwizinga lokuthatha inxaxheba lomsebenzi ziquka:
ingqesho engaxhaswanga okanye inkxaso
Uphando lomsebenzi kunye nokulungelelanisa umsebenzi - ukungadluli kwiiveki ezingama-6 kwiinyanga ezili-12 kunye neveki ezi-4 ezilandelelanayo (kodwa kwiiveki ezili-12 ukuba i-State ihlangabezana nezimo ezithile)
uqeqesho loqeqesho lwemfundo - ukuba ungadluli kwiinyanga ezili-12
Uqeqesho lwezakhono zomsebenzi oluhlobene nomsebenzi
imfundo ngokuphathelele ngqo kwingqesho
ukuhamba kwezikolo zasesekondari ezanelisayo
Ukubonelela ngeenkonzo zokunakekelwa kwabantwana kubantu abathatha inxaxheba kwinkonzo yoluntu.
I-TANF yeNzuzo yeNkcitho
Inkqubo ye-TANF ijoliswe ukubonelela ngoncedo lwezexeshana lwezezimali ngelixa abamkeli befuna umsebenzi oya kubavumela ukuba bazixhase ngokupheleleyo zabo kunye neentsapho zabo.
Ngenxa yoko, iintsapho ezinomntu omdala ofumene uncedo oluxhaswe ngemali ngokumalunga neminyaka emihlanu (okanye ngaphantsi kwindlela yokhetho) angabonakali kwi-cash aid phantsi kweprogram ye-TANF. Amazwe anokukhetha ukwandisa iintlawulo zama-federal ngaphaya kweminyaka emi-5 kwaye unokukhetha ukongeza uncedo kwiinkonzo usebenzisa i-state-kuphela imali okanye ezinye iimali ze-Social Services Block Grant ezikhoyo kwilizwe.
Ulwazi loQhagamshelwano lwenkqubo yeTANF
Ofisi yoNcedo lweNtsapho
Ulawulo lwabantwana kunye neentsapho
Izibonelelo zengqesho kwiinkampani ezinkulu zikaRhulumente zaseMelika
Isigwebo se-Obamacare kunye neemfuno zeNtshurensi ezincinci
Kutheni ukutshabalalisa imali kungekho mthethweni eUnited States
Malunga neNkxaso yeNkxaso yoKhuseleko (SSI)
Yazi Abathandi bakho bebhola yebhola yeBhola yeBhola kunye neCape Famous Basketball Quotes
Ziziphi iiKlabhu zeGalati ezisebenzisa iTiger Woods?
IHununted Gaya Mansion
AmaYuda neYerusalem: Umthombo weBond
10 Iindaba malunga neSarcosuchus, iNkohlakalo enkulu yehlabathi
Isifundo segrama: Ukuhlaziywa kwexesha
Imfazwe ye-1812: iNew Orleans & Peace
KwiSouth University Admissions
Ukufana, i-Perpendicular, okanye Akunjalo?
I-Glossary epheleleyo yeCheerleading Terms
I-Most Recent Shocking Reality TV Breakps